Ọtụtụ mmadụ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala Madagascar
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Transportation » Ọtụtụ mmadụ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala Madagascar
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Madagascar • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ọ dịkarịa ala mmadụ 34 nwụrụ mgbe ụgbọ ala bu ndị na-eto eto Ndị Kraịst na-efe ofufe dabara na ndagwurugwu dị n'etiti Central Madagascar, ndị uwe ojii na ndị isi ụlọ ọgwụ kwuru na Tuesday.
Ndị uweojii kwuru na a gụrụ ozu 12 ọkụ gbara ọkụ na saịtị ahụ, kilomita iri asaa (iri anọ na ise) n'ebe ugwu isi obodo Antananarivo.
Italslọọgwụ kwuru na ọnwụ 22 ndị ọzọ ekwenyela mgbe ọghara oge abalị.
Onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Herilalatiana Andrianarisaona kwuru, "Thegbọ ala ahụ gbara mbọ ịrị otu ugwu n'elu ugwu wee daa ndagwurugwu dị ihe dị ka mita iri abụọ."
Ọ gbara ọkụ mgbe ọ tụgharịrị ọtụtụ ugboro. ”
Hospitallọọgwụ ukwu n'isi obodo ya bụ Antananarivo kwuru na ọ gbara mmadụ iri na asatọ nwụrụ, ebe ụlọ ọgwụ dị n'obodo Ankazobe buru ihe mberede ahụ kwuru na mmadụ anọ nwụrụ.
Ndị njem nọ n'ụgbọ ala ahụ juru n'ọnụ na-esite na etiti obodo Soavinandriana na-aga nzukọ ụka na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke obodo Mahajanga mgbe ihe mberede ahụ mere.